HomePaper, mandrafitra ny fiavianao manokana ho an'ny fampiharana House | Vaovao IPhone
Luis Padilla | 06/04/2021 12:02 | Fampiharana iPhone, HomeKit
Ny mpamorona fampiharana fototra ho an'ny mpampiasa HomeKit (HomeRun sy HomePass ankoatry ny hafa) dia nandefa fampiharana vaovao izay ahafahanao mamorona lafika mahatalanjona ho an'ny fampiharana Home ao anatin'ny segondra vitsy.
Ny rindranasa House dia ahafahantsika manamboatra ireo efitrano izay namboarinay tao amin'ilay rindrambaiko tamin'ny alàlan'ny sary hosodoko rehetra izay mampiasa ny sary izay ananantsika tao anaty roolinay, fa ny valiny farany amin'ny fampiasana sary dia matetika tsy dia nahafa-po. Na izany aza, amin'ity fampiharana vaovao ity, HomePaper, dia afaka mampiasa sary izay raisinay avy ao amin'io efitrano io izahay mba hamoronana sary an-tsary izay tena mahavariana. Ary ny tsara indrindra dia ny fikarakarana ny zava-drehetra ny fampiharana, tsy mila manana fahalalana kely akory momba ny fanovana sary isika mba hahazoana gradient sy personalized fiaviana avy any an-tranonay.
Ny fizotran'ny famoronana sary dia mandeha ho azy tanteraka. Mila maka sary ny efitrano voalaza fotsiny isika, misafidy izany amin'ny rindrambaiko HomePaper ary misafidy iray amin'ireo gradients maro izay efa voafaritra mialoha, na mamorona ny antsika raha irintsika. Ny fampiharana hamorona background izay natao hifanaraka tanteraka amin'ny interface app an'ny Home, ary afaka mitahiry mandrakizay koa isika.
Amin'izany fomba izany no ahafahantsika manokana ny efitrano tsirairay ao an-trano miaraka amina ambadika hafa izay maneho izany, mampiasa loko isan-karazany ary manova azy ireo isaky ny mila ezaka kely isika. Ny fampiharana dia efa misy ao amin'ny App Store, ary maimaim-poana tanteraka ny fisintomana, ahafahantsika mamorona ny ambadika voalohany. Raha te hamorona ny vola rehetra tadiavintsika isika dia afaka manao izany amin'ny € 01,09 ihany. Izy io koa dia fampiharana Universal, manan-kery ho an'ny iPhone sy iPad. Azonao sintonina avy amin'ny Ity rohy ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » HomeKit » HomePaper, mandrafitra ny fiavianao manokana ho an'ny fampiharana Home
Tim Cook dia tsy 10 taona fanampiny eo an-tampon'ny Apple
Microsoft dia manolotra ny Surface Pro 7 vaovao ho safidy tsara indrindra raha ampitahaina amin'ny iPad Pro